Al-Shabaab oo weerar kale ku qaaday Saldhig ciidan oo ku dhow Gaarisa - Jowhar Somali news Leader
Home News Al-Shabaab oo weerar kale ku qaaday Saldhig ciidan oo ku dhow Gaarisa
Al-Shabaab oo weerar kale ku qaaday Saldhig ciidan oo ku dhow Gaarisa
Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ku yaala deegaan duleed ka ah magaalada Gaarisa ee xarunta Gobolka Waqooyi Bari, kaasoo noqonaya weerarkii labaad oo todobaad gudihiis Al-Shabaab ku qaadaan saldhig ciidan.
Sida wararku sheegayaan weerarkan ayaa lagu qaaday saldhig Ciidamada Booliska Kenya ku leeyihiin deegaanka Saretho oo ku dhow xerada qaxootiga Dhadhaab.
Taliye kuxigeenka Booliska ee magaalada Gaarisa Kibet Bowen ayaa sheegay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay soo weerareen xerada.
Waxaa uu sheegay in weerarkaas ay ka hor-tageen, kana dileen labo ka mid ah kooxdii soo weerartay, inkastoo aanu faah faahin.
Sidoo kale Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarkaas, waxaana war lagu qoray baraha Internet-ka ay ku shaaciyeen in weerarkaas ay ku dileen labo askari ka tirsan ciidamada Booliska Kenya, kuna gubeen xarun ay leedahay Shirkadda Safaricom.
Maalmo ka hor ayay aheyd markii Al-Shabaab ay weerareen Saldhigga Ciidamada ee ku yaal deegaanka Manda Bay, halkaasoo ay ku sugnaayeen Ciidamo Mareykan ah oo weerarka ka soo gaaray dhimasho iyo dhaawac.